IGlucometer Accu Chek > Amamitha kashukela egazi
Imitha ephezulu kashukela egazini yokuqapha amazinga kashukela ezigulini ezinesifo sikashukela.
Amaconsi amancane egazi ukukala
Imitha yeglue kashukela ethandwa kakhulu emhlabeni *. Manje ngaphandle kokufaka amakhodi.
Imivimbo enkulu futhi inethezekile yokuhlola
Akukho ukufaka amakhodi okudingekayo
* Kususelwa emiphumeleni yokuthengisa kusukela ngo-2001 phakathi komugqa we-Accu-Chek.
I-glucometer yokuqala neyukuphela kwayo ngaphandle kwemicu yokuhlola *
I-3 ku-1: i-glucometer, izivivinyo ezingama-50, ukubhula ngethanga
Test & Go Technology **
* Emakethe yaseRussia kusukela ngoMeyi 2016
** Vivinya uhambe
59 g ngebhethri
Isibonisi se-Crystal segment liquid segment (LCD)
50 g ngebhethri
Isibonisi sasemuva se-OLED
I-129 g ngebhethri, ikhasethi yokuhlola kanye ne-lancing device
Lesi siza siqukethe imininingwane ephathelene nemikhiqizo eyenzelwe izithameli eziningi, futhi ingahle ifake imininingwane engavunyelwe ukufinyelela emphakathini noma ukusatshalaliswa ezweni lakho. Siyakuxwayisa ukuthi asinasibopho sokushicilelwa kwemininingwane engahambisani nomthetho wezwe lakho.
Kukhona ukuphambana. Ngaphambi kokusebenzisa, kubalulekile ukubonana nochwepheshe futhi ufunde imiyalo.
Amaconsi amancane egazi
Imicu yokuhlola yokugcwalisa okusheshayo
Isibonisi esikhulu esifundeka kalula
Izinyathelo ezi-3 zokuthatha izilinganiso ngaphandle kokusebenzisa amamenyu noma izinkinobho
Ukufakazelwa nokunemba 1 odokotela neziguli abangakwethemba kuhambisana ne-ISO 15197 ejwayelekile yamazwe omhlaba
Isiqinisekiso Somkhiqizi sempilo yonke yedivayisi kanye nokuthi kungenzeka ukuthi kuthathwe mahhala okungenamkhawulo
Umhlahlandlela wokuqalisa osheshayo onemifanekiso ukuze uqalise.
Akukho ukusetha kwangaphambili noma ukuqeqeshwa okukhethekile okudingekayo ukuqala izilinganiso
Ukufundisa ama-video tutorials ahlala etholakala online.
Imemori yokulinganisa okungu-500 namanani ajwayelekile ezinsuku eziyi-7, 14, 30 nezingu-90
Amamaki ngaphambi nangemva kokudla
Faka amandla okulawula ushukela egazini ngemitha elula nethembekile nefanele ye-Accu-Chek Perform
Impilo yeshalofu yemichilo yokuhlola ayixhomekile esikhathini lapho kuvulwa khona iphakethe
Ukulahla kwegazi 0,6 μl
1 Inkomba idatha. I-ISO 15197: 2013 ibeka izidingo zezinhlelo ezisetshenziswa yiziguli ukuqapha ngokuzimela amazinga eglucose ekwelapheni isifo sikashukela. Leli zinga lidinga izidingo zokuqonda ngokunemba okuqinile nezinqubo ezintsha ze-hematocrit nokunye ukuphazamiseka.
Izifo zezinyawo ezinesifo sikashukela: yiziphi, kanjani futhi kanjani ukwelashwa?
IGlycated (glycosylated) hemoglobin
Fomu noma i-metformin
Ingcindezi ephezulu kanye ephansi: okusho okujwayelekile ngokweminyaka, ukuphambuka kusuka kokujwayelekile
Umuthi FARMASULIN - imiyalo, izibuyekezo, amanani nezimpawu
I-Pancreatic necrosis Necrosis ngomqondo wezokwelapha waleli gama isho ukufa kwezitho zezitho, ukunqanyulwa kwe-metabolism kuwo, okuhambisana nezinqubo ezithathelwanayo, zokuvuvukala noma ezinye izinhlobo zokuphazamiseka kwengqondo. ...
Izindlela zokuthola isifo sikashukela: ukuhlolwa kwegazi nge-biochemical
Iqoqo le-Herbal Arfazetin - ikhambi lemvelo lokwelashwa kanye nokuvimbela isifo sikashukela
I-Cefepim - imiyalo esetshenziswayo, i-analogues, ukubuyekezwa kanye namafomu wokukhishwa (imijovo kuma-ampoules wokujova kwe-antibiotic nge-gram eyodwa, amaphilisi) wemithi yokwelapha i-bronchitis, inyumoniya, i-cystitis kubantu abadala, izingane nokukhulelwa
Isifo sikashukela ezinganeni nasentsheniUmlenze uphuthuma, unyawo lwesifo sikashukelaIngcindeziInsulinIzizathuIzinhlobo NezinhloboOkunyeUkulawulwa kwesifo sikashukelaIsifo Sikashukela: Ulwazi olubalulekileUkuhlaziya
Isifo Sikashukela: Ukuvela Kwezinkinga Zeklinikhi
Isifo Sikashukela Sokushukela - Izinzuzo kanye namavelu wansuku zonke
Indima ye-glucophage ekwelashweni kwe-pathogenetic yesifo sikashukela sohlobo 2
Ukucindezela okuphansi kangakanani okusongela impilo
Ukuxilongwa kwesifo sikashukela